Thai Nepal News:: नोट चल्ने, भोट नचल्ने !
हामीले लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौं । सबै राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध पनि गयौं । तर सा“च्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको सबै नेपालीले अनुभूत गर्न सकेका छौं त? पक्कै पनि हामीले सही अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै बा“की छन् । यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीबारे कुरा गरौं ।
हामी २१औं शताब्दीमा छौं भनेर बारम्बार भन्ने गर्छौं, पछिल्लो समय आविष्कार भएका प्रविधिको कुरा गरेर थाक्दैनौं । हाम्रा नेता, सांसद सबैले अरुको देशमा गएर भए पनि ती प्रविधिको प्रयोग देखेका पनि छन्, उनीहरु आफूले देखेका नौला कुराको कथा पनि सुनाइरहेकै हुन्छन् तर आफ्नो देशमा त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नेबारे भने ठोस काम गरिराखेका छैनन् । हामीभन्दा भूगोलमा २२ गुणा ठूलो र मतदाताका हिसाबले चालीस गुणाभन्दा पनि ठूलो छिमेकी भारतको दुई वर्षअघिको केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनको मत परिणाम हामीले मतदान सकिएको केही घण्टामै थाहा पायौं । अझ केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको कुरा हाम्रो दिमागमा ताजा नै छ, परिणाम मतदान सकिएको केही घण्टामै आएको थियो । विश्वमा अन्यत्र रहेका अमेरिकी नागरिकले पनि मताधिकार प्रयोग गरेको समाचार पनि हामीले पढेका थियौं । तर, हामीकहा“ त देशभित्रै समेत तोकिएको मतदान केन्द्रबाहेक अन्यत्रबाट मत दिने व्यवस्थासमेत छैन, विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरा त धेरै परको भयो ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये आवधिक निर्वाचन पनि हो । स्वच्छ, भयरहित, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण आदि निर्वाचनका महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक पक्ष हो । यस्तो निर्वाचन हुन सक्दामात्र लोकतन्त्र सुन्दर हुन्छ, बलियो हुन्छ । स“गस“गै जति धेरै मतदाता मतदानमा सहभागी भए, निर्वाचन त्यति नै सुन्दर हुन्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीबाट आएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नेमात्रै होइन, उनीहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरौं, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउ“छ । अनि स“गस“गै रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने हावादारी सपना पनि देख्न छाडौं, देशमा भएका युवालाई यही“ राख्ने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरौं, त्यसपछि विदेशमा भएकालाई पनि देश फर्काऔं, विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा देशको विकासका लागि लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई निर्धक्कसाथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरौं । केही दशकमै देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ ।